Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO – Dagaaladii ugu dambeeyay ee cadawga lagu qaaday oo faahfaahsan
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO – Dagaaladii ugu dambeeyay ee cadawga lagu qaaday oo faahfaahsan
Wararka nagasoo gaadhaya gayiga Ogadenia gaar ahaan xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo aad ubadan oo ciidamada gumaysiga Itoobiya lagu naafeeyay. Weerarada ay N/hurayaasha CWXO ku qaadeen cadawga oo ka socda dhamaan gobolada dalka ayaa khasaare laxaadleh lagu gaadhsiiyay cadawga iyadoo dhaawaca askarta cadawga iyo maxaysatada la socota ay buux dhaafiyeen isbitaaladii loo baneeyay. Dagaaladii ugu danbeeyay een helnay Warbixanadooda ayaa cadawga lagaga dilay askar kor u dhaafaysa 75 iyo dhaawaca farabadan. Waxaa kaloo lagu gubay sida aad ka akhrisan doontaan faahfaahinta hoose gawaadhida ciidamada qaada iyo asakartii saarnayd.
Dagaaladan ayaa waxay udhaceen sidan;
4/12/12 Daratoole oo Danood katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
12/12/13 Garslay oo Dhuxun katirsan iyo Qudhacsaare oo Danood katirsan dagaalo kudhexmaray CWXO ee masoo jeestayaasha ah iyo kuwa daalan ee gumaysiga waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 8 askari
10 kalana waa lagaga dhaawacay.
12/12/13 Garwaan oo Danood katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/12/13 Haarxajiin oo Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
14/12/13 Shankurusle oo Dhuxun katirsan iyo Carojiifta oo Danood katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
14/12/13 Bukudhaba oo Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/12/13 Bulxan oo Gunagado katirsan waxaa ciidamada cadawga lagaga gubay 1 baabuur oo Uuraal ah waxaana kubasbeelay baabuurkii iyo wixii saaraaba.
18/12/13 Atoorka oo Dhagxmadow katirsan ilaa 5 dagaal oo maalin gudaheed kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay inta lahubsaday 30 askari tira kaloo badana waa lagaga dhaawacay.
18/12/13 Qabri’amaadin oo Yucub katirsan weerar mir ah oo ay CWXO kuqaadeen ciidamada cadawga waxay kugaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahin lagahaynin.
21/12/13 Xaaxi oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/12/13 Qudhacbuule oo Caado udhaw waxaa ciidamada wayaanahay lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagadhaawacay.
26/12/13 Araweelo oo Caado katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaana lagaga dhaawacay 3 askari.
28/12/13 Halgariga oo Garogo’an katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagaga gubay 1 baabuur oo ay isaga iyo wixii saaraaba ay isla basbeeleen.
30/12/13 Caado oo Doolo katirsan kamiin ay kaxidheen N/hurayaasha CWXO waxaa soogalay ciidan uu cadwguleeyahay waxaana halkaas lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Dhanka kale waxaa soobadanaya islaynta iyo goosashada ciidamada cadawga dhaxdooda ah waxaana iskulaayeen dhow goobood oo ay ciidan iskaga dileen
28/12/13 Karkaarka oo Fiiq katirsan dagaal kudhexmaray ciidanka cadawga dhexdooda waxay iskaga dileen 3 askari isla maalintaas dagaal labaad oo kudhexmaray kudaha magaalada Fiiq waxay iskaga dileen 1 askari.
30/12/13 Habaaska oo Fiiq karisan dagaal ciidanka cadawga dhaxdooda ah waxay iskaga dileen 2 askari
30/12/13 Ciidanka cadawga ee kusugan gudaha Dagmada Fiiq waxaa kudhacay cudur daacuun ah waxaana kabakhtiday inta la ogyahay 7 askari. Dhanka kale dabayaaqadii bishii 12aad waxaa ciidamada gumaysiga ee fadhigooduyahay Gunagado kasoo goostay 15 askari oo iyagoo hubaysan usoo galay CWXO .